Wasiirka Maaliyada Jubbaland oo ka jawaabay xisaab celinta lacagihii horey loogu diray… – Hagaag.com
Wasiirka Maaliyada Jubbaland oo ka jawaabay xisaab celinta lacagihii horey loogu diray…
Posted on 25 Oktoobar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Wasiirka Maaliyadda Jubbaland C/rashiid Jire ayaa si kulul uga jawaabay qoraal uu soo saaray Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle, kaasoo Maamul goboleedyada looga codsanayo inay soo dhameystiraan xisaab celinta lacagihii horay loogu diray oo ka mid aheyd taageerada ay dowladda Soomaaliya siiso maamul goboleedyada.
Wasiir C/rashiid Jire Qalinle ayaa su’aal ka keenay qoraalka xisaab celinta ee ka soo baxay Wasiir Beyle, isagoo is weydiiyay sababta kaliya loogu soo beegay labada shir ee maamul goboleedyada ay yeesheen, sida shirkii ka dhacay Kismaayo iyo shirka hada ka socda Garowe, waxaana uu xusay in ujeedka yahay in shirka u socda maamul goboleedyada la doonayo in lagu carqaladeeyo.
“Sagaarada iyo tuuryada maxaa kulmiyay baa la yiri, shirkii hore September 8-deedii ka dhici jiray Kismaayo sidaan oo kale ayay qoraal u soo saareen, hadana qoraal kale ayay soo saareen iyadoo uu socdo Shirka Garowe oo ay leeyihiin waxaa u baahanahay xisaab celin, waa wax lagu carqaladeynayo shirarka iyo wadatashiga dowlad goboleedyada, waxay noqotay kaar la isticmaalo”ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Jubbaland.
Waxaa uu sheegay in aanay isku mashquulin doono warqada Wasiir Beyle uu soo saaray, isagoo tilmaamay in wixii nidaam iyo xisaab celin ay u mari doonaan nidaam dowlo ah, balse dowladda Federaalka ay ka sugayaan inay ku soo gudbiyaan baraha bulshada.
Sidoo kale waxaa uu meesha ka saaray hadalka Wasiir Beyle ee ahaa in Wasiiradda Maaliyadda dowlad Goboleedyada ay si dhow ula shaqeeyaan, isagoo tilmaamay in wixii ka dambeeyay 8-dii bishii September ay hakiyeen wixii wada shaqeyn ee ay la lahaayeen dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Khilaafka u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa heerkii ugu xumaa gaaray, waxaana weli guuleysan dadaalo uu waday Aqalka Sare oo lagu dhex dhexaadinayo dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.